Electle Hydralic Byple - EPONT
Electle Hydralic Byple
’Re nọ n’ebe kwesịrị ekwesị maka Electle Hydralic Byple.Ka ọ dị ugbu a ị maraworị na, ihe ọ bụla ị na-achọ, ị doro anya na ịchọta ya EPONT.anyị na-ekwe nkwa na ọ bụ ebe a na EPONT.
E ji ihe nchebe eCO-eCE rụọ, ọ na-edebe ike. Ọ na-ejigide arụmọrụ nke ọma naanị na-ewe obere ike ma ọ bụ ike iji rụọ ọrụ..
Nzube anyị na-enye ndị kasị mma Electle Hydralic Byple.n'ihi na anyị ogologo oge ahịa na anyị ga-ifịk ifịk na-akwado ndị ahịa anyị na-enye irè ngwọta na-eri uru.
na 2.5T ala n'ala Jack
Ọhụrụ nke 2.5T dị ala, ngwaahịa anyị agafeela OA, GS& Asambodo tuv nke European Union. Ogo ngwaahịa anyị bụ eziokwu na ntụkwasị obi. A na-ere ha nke ọma na ahịa ndị Europe na nke America. Ngwaahịa niile na-eji ọgwụ mgbochi kompeni gburugburu ebe obibi na - 45 Celsius hydraulic, yabụ enwere ike iji ha na mpaghara oyi. Biko tụkwasị obi anyị Epont. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ elont, anyị ga-aga n'ihu na-eme nke ọma
Mpempe akwụkwọ kdralic na-acha uhie uhie.Enweghị ịgọnahụ na ngwaahịa a nwere mmetụta dị mma na ọnọdụ ma na-enye ntụrụndụ, ọkachasị maka nsogbu ihi ụra na ndị isi ọwụwa.Ngwaahịa ahụ nwere nnukwu ogo. Mbibi nke elu ahụ agaghị enwe ike ịkpụsa ndị dị ka cracks, notches, oghere ma ọ bụ gbajiri.Kinddị ihe ndina a nwere ike inyere mmadụ aka ịrahụ ụra nke ọma n'abalị, nke na-enyere aka imeziwanye ma melite ikike itinye uche.
Everont sistem bụ nchịkọta nke engine dị iche iche, ala Jack 3t, Jack Inffry nke bụ ahụ ụlọ ọrụ pụrụ iche maka nyocha, mmepe, mmepụta na ahịa.
Kachasị mma nke na-eweta bydraulic byple
Encontical kacha mma na-eweta cydraulic Bydraulic Bydraulic, ụlọ ọrụ ahụ bụ nchịkọta nke injin dịgasị iche iche, ala Jack 3T, nke na-ahụ maka ụlọ ọrụ, mmepe na ahịa.
n'ala jaak 3T
Ala Jack 3t, bụ ogo dị mma, ngwaahịa agafeela OA, GS& Asambodo tuv nke European Union. Ogo ngwaahịa anyị bụ eziokwu na ntụkwasị obi. A na-ere ha nke ọma na ahịa ndị Europe na nke America. Ngwaahịa niile na-eji ọgwụ mgbochi kompeni gburugburu ebe obibi na - 45 Celsius hydraulic, yabụ enwere ike iji ha na mpaghara oyi. Biko tụkwasị obi anyị Epont. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ elont, anyị ga-aga n'ihu na-eme nke ọma
Ọkachamara ọkachamara pụrụ iche cydraulic karama jack na-emepụta
Mkpọọ ụkwụ gị, ngwaahịa anyị agafeela OA, GS& Asambodo tuv nke European Union. Ogo ngwaahịa anyị bụ eziokwu na ntụkwasị obi. A na-ere ha nke ọma na ahịa ndị Europe na nke America. Ngwaahịa niile na-eji ọgwụ mgbochi kompeni gburugburu ebe obibi na - 45 Celsius hydraulic, yabụ enwere ike iji ha na mpaghara oyi. Biko tụkwasị obi anyị Epont. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ elont, anyị ga-aga n'ihu na-eme nke ọma